Izintelezi ze-Husky White Eyingqayizivele - Izinhlobo
Zinhle, zinhle futhi zinobuhlakani. Izici zabo zempisi kanye ukubukwa okuluhlaza okwesibhakabhaka ingathumba ngempela noma iyiphi inhliziyo yesithandwa senja. Umlandeli oziqhenyayo weGame of Thrones angahle akhunjulwe ngempisi kaJon Snow, iGhost, noma kunini lapho bethola khona umbono omangalisayo weWhite Husky.
Ngokwami, ama-Huskies aseSiberia angenye yezinhlobo zami zezinja engizithandayo. Kepha namuhla, ake sikhulume ngokuhle, okumsulwa Husky omhlophe waseSiberia !
Uvelaphi uMhlophe Husky?
Ama-White Huskies mahle kangaka!
Ungavumeli lokho kubukeka okunolaka kukukhohlise!
Konke odinga ukukwazi ngokunakekelwa kwe-White Husky
Ukucatshangelwa okubili okubalulekile ekukhuliseni i-White Husky
Izinhlobo ezihamba phambili ze-Husky
Ingabe kukhona i-Mini White Husky?
Ziyini izindleko zokuba ne-White Husky?
Ungamtholaphi uHusky Omhlophe waseSiberia
Kuyinja ongeke uyithande!
Ngokwamarekhodi omlando, AbakwaSiberian Huskies zaqala ukukhuliswa nxazonke Eminyakeni engama-3 000 eyedlule ngabantu besizwe samaChukchi baseSiberia, eRussia.
ISiberia ibhekwa njengenye yezindawo ezinamakhaza kakhulu emhlabeni. Ngenxa yalokhu, amaHuskies aseSiberia ajwayele kakhulu isimo sezulu esibi nesibandayo.
Yibo izinja ezisebenzayo waseNyakatho, enza imisebenzi efana sledding nokuzingela . Iphakethe le-Husky laseSiberia lisebenza kanzima nsuku zonke ukuqoqa nokuhambisa izinkuni, ukudla, izimpahla, ngisho nabantu kuma-sleds abo.
Kepha ngenxa yokuthi zivela endaweni lapho abantu abaningi bengakaze baye khona, baqala ukuthola ukuthandwa emhlabeni jikelele ngesikhathi se- ekuqaleni kwekhulu lama-20 .
Ngo-1910, iqembu elihlonyiwe leSiberian Huskies langena ku-All Alaska Sweepstakes Race elingamakhilomitha angu-408 futhi lanqoba.
Ekubonakaleni kwabo kokuqala ngaphandle kwezwe labo, abantu base-Alaska babecabanga ukuthi ama-Huskies, ayedlala ingubo emhlophe, ayengafani ne-Alaskan Malamutes yabo emikhulu.
Kepha abakwaHuskies ’ imizimba enciphile kube yinzuzo futhi kwabenza baba lula ezinyaweni zabo. Baphinde bagijima ngesitayela esiyingqayizivele, uboya babo obukhangayo obumhlophe buhlangana endaweni eneqhwa.
Ukunqoba kwamaHuskies kwabaholele ekutholeni ukuqashelwa okwabo isivinini nokubekezela . Zabuye zaduma ngobuhle bazo.
Iqiniso elijabulisayo: Uma uvakashela iCentral Park eNew York City, uzothola isithombe segolide sikaBalto, omunye wamaHuskies adume kakhulu emhlabeni. Ebusika bango-1925, uBalto noTogo, omunye u-Husky, bahola iqembu elijikijelwayo lihamba amakhilomitha angama-674 endaweni yase-Alaskan ukuletha i-diphtheria antitoxin esindisa impilo edolobheni laseNome.
Ubuwazi ukuthi lezi zinhlobonhlobo zikaHusky ziyivelakancane? Kungaba nzima ukuthola iHusky emhlophe phakathi kwepakethe yalolu hlobo.
Ijazi labo elimhlophe elimnyama liwumphumela we ufuzo olweqile . Lapho izinja ezimbili ezikulesi sakhi zofuzo zizalaniswa zodwa, ngokuqinisekile kuzoba okungenani nomntwana oyedwa kudoti ozovela njenge-White Siberian Husky, ebizwa nangokuthi i-Albino Husky.
Amanye ama-White Huskies nawo anombala ophuzi noma obomvu ezinyaweni zawo. Lawa maHuskies abizwa ngokuthi U-Isabella White Huskies .
Enye indlela yokuhlukanisa i-All White Husky ngamakhala ayo, okufanele abe njalo umnyama kuphela . Lezi zinja futhi zivame ukuba ne-pigmentation emnyama emehlweni abo nasezinsinini zabo.
Ngaphandle kwengubo yayo ehlanzekile, isici esigqame kakhulu seWhite Husky ngamehlo ayo. Uma ubheka amehlo ale nja, ungahle uzizwe sengathi ingabona ngomphefumulo wakho. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma ine- ukubhangqa okuluhlaza okwesibhakabhaka okubandayo !
Ukuba namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka kuvamile phakathi kwamaSiberian Huskies, kepha futhi angaba namehlo ansundu. Kuyathakazelisa ukuthi amanye amaHusky anamehlo anemibala ehlukene, isimo esibizwa kanjalo i-heterochromia .
Angaba makhulu kangakanani ama-White Huskies?
UHusky Omhlophe okhule ngokugcwele une- zinkulu kodwa zinciphile umzimba. UHusky wesilisa umi kusuka Amasentimitha angama-21 kuya kwangu-23 (53 kuya ku-59 cm) ubude kanti uHusky wesifazane angakhula noma yikuphi ukusuka Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-22 (50 kuya ku-55 cm).
Ngokwesisindo, abesilisa abaMhlophe abangamaHusky banesisindo Amakhilogremu angama-45 kuye kwangama-60 (20 kuya ku-27 kg) kanti abesifazane bavame ukuba lula, besisindo phakathi Amakhilogremu angama-35 nangu-50 (15 kuya ku-22 kg).
Huskies bavame ukuba kwemisipha - nakanjani ukwakhelwa okwenziwe sledding nokwenza eminye imisebenzi enzima ukusiza amaphakethe abo abantu.
Yize ebukeka njengempisi enolaka, ama-Albino Huskies empeleni unothando futhi mnene .
Bayakujabulela ukuthola izingalo kubantu babo futhi baziwa ngobungani babo.
Ngenxa yesimo sabo sokuzola, amaWhite Siberian Huskies enza a inja enkulu yomndeni .
Bayadlala eduze kwabantu abajwayelene nabo, ikakhulukazi izingane, ngisho nezinye izilwane ezifuywayo ekhaya.
Azenzeli inja enhle yokuqapha, noma kunjalo. Njengoba bethanda ukudlala ngokuzitika nokuzijabulisa, bahlala begcina sebenza ubungani nawo wonke umuntu abahlangana naye.
Isexwayiso: Ama-White Huskies angama-howler amakhulu!
Esinye isici esingaqashelwa phakathi kwamaHusky aseSiberia ukuthi bahlala bekhala. Ungacindezelwa kanzima ukuthola uhlobo olwenza umsindo omkhulu njengeSuserian Husky.
Njengezinja eziningi, ukuhewula kuyindlela ukuxhumana ngaphakathi kwephakethe labo.
Ukuhewula kukaWhite Husky kungasho izinto ezilandelayo:
Umuntu ongaziwa ungena endaweni yabo, ngakho-ke kudingeka bazise iphakethe labo futhi bazise abangenayo ukuthi bangena kwenye indawo yepakethe.
Banesithukuthezi noma bakhathazekile futhi bafuna ukunakwa kwakho noma amalungu epakethe akanye nabo ’. I-White Huskies ayihambisani kahle nokuba wedwa, ngakho-ke ukukhala kwabo kungaba uphawu lokukhathazeka ngokwehlukana.
Isebenza njengohlobo oluthile lwendlu yesibani, indlebe eyenzelwa lokho. Lapho abaseSiberia Huskies behewula, kuyisibonakaliso sokuzihlanganisa kabusha futhi babuyele ezisekelweni zabo ngemuva kosuku lokuzingela.
Kungaba yindlela yokuveza ubuhlungu, njengokuthi abantu bakhala kanjani noma bahayize noma nini lapho silimala.
Iqiniso elijabulisayo : Ukuhewula okujule kakhulu imvamisa kungokwenja ye-alpha.
Kwesinye isikhathi, amaHuskies aseSiberia angaba nekhono elihle lokukhuluma aze afike ezingeni lokuthi angazwakala njengomuntu okhulumayo. Omunye uHusky, yize engemhlophe, odume ngaleli khono nguMishka, inja engathi, 'Ngiyakuthanda.'
Ama-Huskies aseSiberia awuhlobo oluqinile, oluqinile, ngakho-ke kulula ukuwanakekela. Okufanayo kuya ku-White Husky.
Nawu umhlahlandlela osheshayo wokudla nokuhleleka okuhle kakhulu kwama-White Huskies, kanye nezinkinga zempilo lezi zinja ezingaba nazo.
Ukondla i-White Husky yakho
Yize benomzimba omkhulu, ama-Albino Huskies awadli kakhulu, ngakho-ke izindleko zokudla zingaba sezingeni eliphansi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo.
Inani eliphakanyisiwe lansuku zonke lamaSiberia Huskies ngu 1 ½ 2 izinkomishi zokudla kwenja eyomile , ihlukaniswe kabili. Kodwa-ke, izinto ezifana nobudala, imetabolism, ukwakha, kanye nezinga lomsebenzi kufanele zicatshangelwe lapho kutholwa okulungile ukudla ngenja yakho.
Qiniseka ukuthi unikeza i-White Husky kibble yakho esezingeni eliphakeme enezithako zemvelo eziningi ngangokunokwenzeka ukukhulisa impilo yabo nokuzivikela ezifweni ezivamile.
Bheka izithako ezifana ama-blueberries, i-broccoli, ne-izaqathe . Lokhu kuzohlinzeka ngomsoco kanye namavithamini azosiza ukubona kwabo, njengeVitamin A, i-carotenoids, ne-beta-carotene.
Amaprotheni kufanele abe nawo ekudleni kwe-White Husky, njengoba amaprotheni aqinisa amalunga abo futhi akhulise ukukhula kwemisipha. Zama ukondla i-Husky kibble yakho imithombo esezingeni eliphakeme yamaprotheni , njengamaqanda, inyama nenhlanzi.
Gcina ukusetshenziswa kwe-carbohydrate ka-Husky yakho kuphansi. Njengoba usizo njengama-carbs ekunikezeni amandla, okuningi kwawo kungadala ukuzuza kwesisindo.
Qaphela ukuthi ungazondli ngokweqile, njengoba kungenza amaHuskies othambekele ekukhuluphaleni ngokweqile . Kufanele ukwazi ukuzwa - kepha ungaboni - izimbambo zazo lapho uzithinta kancane. Isinqe sikaHusky kufanele futhi sibonakale uma ubheka phansi umzimba waso.
Izidingo zokuzilungisa zeWhite Husky
Ukunakekela i-White Husky's ijazi elikabili , ekhipha okuningi unyaka wonke ikakhulukazi ngesikhathi sentwasahlobo nasekwindla, akudingeki uthathe i-White Husky yakho iye kubahlungi ababizayo.
Ungavele usebenzise ibhulashi le-rake elisebenzisekayo ukukama izinwele zalo ezeqile engubeni. Qiniseka ukuthi uxubha uboya beWhite Husky okungenani kanye ngeviki ebusika nasehlobo. Khulisa imvamisa kuye ku- ukuxubha nsuku zonke ngezikhathi zokuchitha.
Zivikele nge-vacuum cleaner enokwethenjelwa, futhi, ukugcina indawo yakho ingenaboya bezinja.
Into ebalulekile okufanele uyikhumbule ukuthi ungalokothi uphuce i-White Husky yakho ! Ngeke ubapholise, futhi badinga uboya obengeziwe ukugcina izinga lokushisa lomzimba elijwayelekile.
Ungakhathazeki uma uboya bakho be-White Husky buqala ukuguquka ophuzi . Lokhu kungabangelwa ufuzo noma ukumane kungcole ekudlaleni nxazonke.
Ama-Huskies amhlophe athanda ukuba ngaphandle nokulala otshanini ajwayele ukuthola uboya obunamabala . Umswakama unganamathela emathonjeni amajazi awo, kubangele ukuqoqana kothuli ne-chlorophyll.
Lokhu kudinga ukugeza okudingeka kahle usebenzisa okunye i-shampoo yenja emhlophe emhlophe ukususa ibala. Uma lokho kungawenzi umsebenzi, ungathatha inja yakho uyihlanzele bese uyivumela ibuyise inkazimulo ecacile yejazi lakho le-White Husky.
Ngaphandle koboya obunamabala, ama-White Huskies kufanele agezwe kuphela lapho kudingeka . Lokhu kusiza ukugcina uwoyela wemvelo wezinwele zabo.
Ingabe usukulungele ukuqeqeshwa nsuku zonke?
Ukuqeqesha i-White Husky yakho nsuku zonke kuyadingeka. Yize behlakaniphile, amaHuskies anokuthambekela ekubeni onenkani . Ukungaguquguquki nokuqeqeshwa kwabo kuyindlela yokuhamba ngoba le nja ichuma ngokujwayelekile.
Njengoba i-American Kennel Club iphakamisa, kufanele uzifundise mayelana nokusebenza ngempumelelo kakhulu amasu okuqeqesha ngezinhlobo ezahlukene zezinja.
Isibonelo, ama-Huskies angabacabangi abazimele futhi bayathanda ukuzijabulisa ngokwemibandela yabo. Ngakho-ke noma ngabe bangathatha kalula amaqhinga amasha ngesikhathi sokuqeqeshwa, bangahlola ukubekezela kwakho namakhono obuholi ngokuthi ukungalandeli nalokho abakufundile.
Qiniseka ukuthi izikhathi zokuqeqesha kumnandi futhi kufushane ukugcina i-White Husky yakho isebenza kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ukuzijabulisa kufanele futhi iqalwe ngenkathi i-White Husky omncane . Njengomzwelo wemvelo, zingabona izilwane ezincane njengezisulu.
Bangagcina ngokujaha futhi babe nolaka eduze kwezinye izilwane uma bengahlangene kahle.
Ukuzivocavoca kwe-White Husky kudinga
Uma uwuhlobo lomuntu ohola indlela yokuphila enhle yokuhlala phansi, iWhite Husky kungenzeka ukuthi ayikulungele. Ama-Huskies ayakuthanda ukuhlala iyasebenza futhi ube inqwaba yamandla ukushisa, ngenxa yemvelo yabo njengezinja ezisebenzayo.
Ngokunikwa amandla nokukhuthazela kwabo, uHusky angakwazi ukuqhubeka usuku lonke, adlale futhi agijime. Lezi zinja ziyaneliseka uma nje zithola okungenani ihora nohhafu lokuvivinya umzimba nsuku zonke.
AmaWhite Huskies azodlula, futhi, uma uthatha isinqumo sokuzibandakanya emisebenzini enamandla yokuqina efana imidlalo ye-canine futhi ukuqeqeshwa kwe-agility .
Ngaphandle kwemisebenzi ebonakalayo, amaSkyeri Huskies nawo ayadinga ukugqugquzela ingqondo nsuku zonke. Okunye ukuzivocavoca kwengqondo okuyisisekelo kufaka ukufunda amaqhinga amasha nemiyalo (ukuqeqeshwa kokulalela), kanye imidlalo yephunga .
Ngemidlalo yephunga, ungasebenzisa ukuphatha kwabo ukulandelela. Fihla umuthi kwesinye sezandla zakho bese ubona ukuthi inja yakho ingakhetha isandla ngomuthi okuso. Ngaphandle kwezandla zakho, ungasebenzisa futhi izinkomishi noma ezinye iziqukathi.
Ukuvumela i-White Husky ukuthi ibhoreke kubuhlakani bayo kungaholela isimilo esonakalisayo njengokuhlafuna, ukukhonkotha, nokumba.
Ukubanikeza ngemisebenzi yomzimba nengqondo ngeke kuqinisekise kuphela inja yakho injabulo nenhlalakahle , kodwa futhi kuzokusiza ugcine ubudlelwane obuzwana nenja yakho.
Izinkinga zezempilo zamaWhite Siberian Huskies
Ngokuvamile, i-Husky yaseSiberia iyi- uhlobo olunempilo . Yize behlelwa yizifo zofuzo ezinjenge i-hip dysplasia futhi ngamehlo , lezi zinja zingaphila impilo ephelele ye- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14 lapho inakekelwa kahle.
Kodwa-ke, kuyalulekwa ukuthi i-White Siberian Husky yakho ihlolwe ukuthola izimo zezempilo ezingaba khona. Njengoba kweluleke i- I-American Kennel Club , AmaHuskies nawo kufanele adlule ukuhlolwa kwe-hip futhi ukuhlolwa kwamehlo
Usafuna i-Albino Husky? Ngabe usuthathe isinqumo sokuthi ulungile ngesikhathi nomzamo odingekayo ukuze unikeze le nja ukuzivocavoca nokuqeqeshwa ekudingayo?
Nazi ezinye izinto ofuna ukuzibheka ngaphambi kokuthi uphume uvakashele umfuyi oseduzane.
1. Ingabe isimo sezulu endaweni yangakini sipholile ngokwanele?
Ngokuthandwa kwayo emhlabeni jikelele, abantu abaningi emhlabeni jikelele banesifiso sokuba nomnikazi nokukhulisa iHusky yaseSiberia. Kepha into eyodwa abantu abavame ukuyikhohlwa ukuthi amaHuskies akhuliswe kangcono kuwo isimo sezulu esibandayo .
Uma likhithika lapho uhlala khona, bayeke badlale kuwo bajabule. Ngokuqinisekile uzothanda ukubona i-pup yakho ejabulayo inebhola eqhweni!
Bangachuma endaweni enesimo sezulu esifudumele, kepha kungaba nzima kuHusky ukuzivumelanisa nezimo. Uma ngikhuluma iqiniso, akulungile ukuvumela i-White Husky ihlupheke kuyo yonke le nkinga.
Uma ufuna inja enkulu enengubo emhlophe, ungahle uthande i- I-English Cream Golden Retriever . Le Retriever inengubo ephaphathekile impela icishe ibe mhlophe.
Ama-Retrievers eGolide njengoba nje uhlakaniphile, unobungane futhi unobuqili njengamaHusky eSiberia, kepha amajazi abo enziwa ukumelana nokushisa ezindaweni ezifudumele.
Abanye abanikazi baze bathathe iGoldens yabo bayiyise olwandle phakathi nenkathi eshisayo yehlobo.
I-English Cream Golden Retriever ( umthombo)
2. Ngabe igceke lakho linocingo?
Ukuletha ekhaya inja ezimele kakhulu, edlalayo futhi esebenzayo kusho ukuthi kuzofanele ubeke uthango. Lama Huskies ayathanda ugijime uzulazule indawo ebazungezile.
Enjeni efana neHusky, ucingo olungenantambo lungaba ukubheja kwakho okuhle kakhulu ukukuqukethe kusakhiwo sakho. Lawa ma-canine ahlakaniphile adume kabi awawo imikhuba yokumba . Bangasebenzisa le ndlela engathandeki ukubaleka egcekeni lakho bazulazule.
AmaHuskies aseSiberia anomzwelo wemvelo wokumba azungeze futhi akhe izimbobo zokudla nezinkwali zawo. Kwesinye isikhathi bayamba bazakhele indawo yokuhlala noma indawo yokuphumula.
Indlela engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi ayimoshi ingadi yakho noma utshani ukuthi ubabheke ngenkathi bengaphandle. Ungasetha futhi i ' indawo yokumba ’Ngakho i-White Husky yakho ingazitika ngemvelo yayo ngaphandle kokulimaza ingadi yakho.
Ngenxa yesimo sabo sokuzola, nobungani, amaHuskies aseSiberia avamise ukuwela nezinye izinhlobo ezihlanzekile. Izinja eziningi ezivelayo zigcina ukubukeka okufana noHusky futhi zinesimo esifanayo esiphumayo.
Nawa ama-Husky crossbreeds azobamba ukunaka kwakho, nawo.
Umxube we-White Husky German Shepherd
Ngaphandle kwalokho kwaziwa njenge UGerberian Shepsky , i-German Shepherd and White Siberian Husky mix is ​​a unesibindi, uqaphile futhi uthanda ubumnandi inja .
Its umzimba oqinile iphakathi nendawo kuya phezulu ekwakhiweni, okungamangalisi ukuthi unikezwe usayizi wabazali bayo. Lezi zinqamulelayo ezivame ukuba nezindlebe eziqondile, ezicijile, ezine- amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka weHusky noma amehlo ansundu we Umalusi waseJalimane .
Umxube we-White Husky German Shepherd ( umthombo )
I-White Alaskan Husky
I- I-Alaskan Malamute impela umdlalo ofanele we-Husky yaseSiberia ngoba izici zawo zomzimba zihambisana kahle, okuholela ku inzalo enempilo emzimbeni ngezici ezifiselekayo.
UWhite Alaskan Husky waziwa njengongasebenzi kakhulu kunabazali bakhe. Zihle kakhulu zizungeze izingane - ziyavikela, zinothando, futhi azimbi kakhulu uma kukhulunywa ngesikhathi sokudlala.
I-White Alaskan Husky ( umthombo )
Ungahle ukwazi ukuthola ama-Miniature White Huskies avela kubalimi abathile. Ukuma kukhulu njengo Amasentimitha angu-12 kuya kwangu-16 (31 to 41 cm) futhi inesisindo kuphela 15 kuya ku-30 ​​lbs (7 kuya ku-13 kg), lezi zinja ezincane ezinhle ngokuvamile ziyinzalo yama-runt kudoti.
Khumbula, noma kunjalo, ukuthi lezi zinja ezisetshenzisiwe zikhona akuvunyelwe yiSiberian Husky Club of America, eyakhipha isitatimende ngonyaka wezi-2013 mayelana nokugqugquzela kwayo amazinga ohlobo lwe-AKC lweHusky.
Ama-Mini White Huskies ajwayelekile hhayi njengokwazi njengabalingani babo abakhulu, ikakhulukazi emisebenzini yokuzalanisa ngokukhethekile, njengokugoba izihlibhi noma ukuzingela.
Uma ngabe inhliziyo yakho isethwe kunguqulo encane yeHusky, ungacabanga ukuthola i- I-Alaskan Klee Klai noma a Ukuhlanganiswa kwePomeranian-Husky esikhundleni salokho. Yize zingenawo amajazi amhlophe qwa, lezi zinja zifana ngokuphawulekayo ne-Husky yaseSiberia ngokubukeka.
Mini White Husky ( umthombo )
Intengo yomdlwane we-White Siberian Husky ingahle isuke kusuka $ 400 kuya ku- $ 800 . Izici ezithile zingathinta izindleko zemphuphu ye-White Husky, njengezindleko zokuzalisa kanye nokufunwa.
Intengo yenja ye-White Husky nayo incike ekutheni ufuna i-Husky njenge isilwane noma njenge bonisa inja . Imidlwane evela eSuserian Huskies eklanyelwe ukubamba iqhaza embukisweni wezinja futhi inemiklomelo eminingi yezindandatho zemibukiso imvamisa ibiza kakhulu ngenxa yezindleko zokugcina impilo nokuzilungisa.
Imidlwane emhlophe yeHusky nge amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka namaMini White Huskies nawo abiza kakhulu, ngoba nje kunesidingo esikhulu sawo. Amanani we-Mini White Husky angahluka kusuka ku- $ 750 kuya ku- $ 1,200 .
Uma kukhulunywa ngokunakekela i-White Husky, izindleko eziyinhloko ezizocatshangelwa kungaba njalo ukudla , imigomo , futhi inhlanzeko . Ukungena kuwo imidlalo yezinja noma izikole zokulalela Ungangeza nezindleko, futhi.
Uma uthathe isinqumo sokuthenga umdlwane we-White Husky, nazi ezinye izinhlobo zokufuya ongafuna ukuzihlola:
Midnight White Siberians (ENew Hampshire)
Isigodlo seHusky (ISouth Carolina neNorth Carolina)
UBama Huskies I-Alabama)
Kepha uma ukhetha ukwamukela kunokuthenga, khona-ke ungabheka lezi zikhungo zokutakula nezokutholwa ukuze ubone ukuthi zine-White Husky ongayamukela yini ekhaya lakho.
Mahhala Umoya waseSiberia Husky (Illinois)
Ukutakulwa KwaseSiberia kwe-NM ENew Mexico
Ukuhlengwa kweTexas Husky
I-head-Turner eyi-All-White Siberian Husky nakanjani izokugcina ezinzwaneni zakho.
Lezi zinja zikhona unamandla futhi uyadlala , ngakho-ke bazokwenzela izilwane ezinhle kakhulu imindeni eminingi. Bazozwana kahle ngisho nezingane ezincane.
Kodwa-ke, asikwazi ukuphika ukuthi amaHuskies adinga umsebenzi omningi .
Zifuna ukunakwa kakhulu futhi zidinga umnikazi ongeke akhathale ukuzilungisa nsuku zonke kanye ukuzivocavoca umzimba nokuzijwayeza njalo .
Ingabe ungumnikazi we-White Siberian Husky? Singathanda ukufunda ngokuhlangenwe nakho kwakho kumazwana angezansi!
usayizi wokuxubana wempisi waseJalimane
ama-pit bull abukeka njengezingwe
labrador golden retriever mix umdlwane
igolide retriever mix umalusi waseJalimane
umalusi omncane wase-australia u-blue heeler mix
amagama amahle ezinja zabafana ezincane